सपनाका अ’ स्लिल फोटो बाहिरियो फोनमा यस्तो भनिन् सपनाले सर्मिलालाई (हेर्नुस् भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सपनाका अ’ स्लिल फोटो बाहिरियो फोनमा यस्तो भनिन् सपनाले सर्मिलालाई (हेर्नुस् भिडियो)
यो समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ भिडियो कृपया पुरा हेर्नुहोला !
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा सामाजिक सञ्जालमा सपना रोका मगर र बिनय जंग बस्नेत चर्चामा रहेका छन् । विश्वका सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी सपना सामाजिक कामका कारण चर्चामा आएकी हुन् । उनी पशुपति आर्यघाटमा लाश जलाउने कामका कारण विश्वका सय प्रभावशाली महिलाको सूचीमा राखेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसीले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० का प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाका रूपमा छानेका सय जनामध्ये नेपालकी सपना रोका मगर समेत परेकी थिइन् । कठिन परिस्थितिमा पनि संघर्षको बाटोलाई स्वीकार्दै समाज परिवर्तनका लागि नौलो र उदाहरणीय काम गरेका सय महिलाको सूची बीबीसीले सार्वजनिक गरेको हो ।
म्याग्दी घर भएकी सपना पढाइको लागि काठमाडौं आएकी थिइन् । यहाँ आएपछि बेवारिसे व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रका अध्यक्ष तथा समाजसेवी विनयजंग बस्नेतले बेवारिसे लाश जलाउने गरेको देखेपछि उनले पनि यही काम थालेकी हुन् । अलपत्र परेका लाशको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उनले बताउँदै आएकी छन् ।
उनले बिनय जंग बस्नेतलाई आफ्नो बुवा भएको भन्दै आएकी थिइन् । तर अहिले सामाजिक सञ्जालमा यी दुई जनालाई लिएर अर्कै कुरा बाहिर आएको छ । बस्नेतले रोकामाथि छोरीको व्यवहार नगरेर अर्कै व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । यो बीचमा सपना रोका आफैंले यस विषयमा प्रतिकृया जनाएकी छिन् ।
उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुराहरु मेरो आफ्नो अनुमती बिना नत कसैले लेख्न सक्छ नत कसैले बोल्न नै सक्छ । सायदै अवगत छ होला कि उसलाइ मानहानी को मुद्दा लाग्छ नै, जब कि मेरो विगत र विगतमा घटेका कुराहरु मैले स्वीकार गरेकी छु । त्यहीँ विगत र विगतको कुराहरुलाई लिएर म कोसंग हिडे , मैले कोसंग के गरे भन्ने कुरा बाहिर ल्याउनु अघि मसंग अनुमती लिनु पर्ने हुन्छ ।
भोलि सबै जना कानुनको दायरामा बसेर फेस टु फेस कुराकानी गरौंला । सबै जना प्रती आभारी छु’ बस्नेतले पनि आफुमाथि लागेको आरोप गलत्त भएको बताएका छन् । उनका अनुसार सपना अहिले आफ्नै काममा व्यस्त रहेका कारण उनीसँग काम गरिरहेकी छैनिन् ।
के छ त निशा घिमिरेको पछिल्लो अवस्था ? बिहानै नर्सहरू सित यसरी बोलिन् शरीरको तौल पनि बढ्यो (हेर्नुस् भिडियो सहित)
शिशिर भण्डारीको वास्तविक जीवन कथा बाहिरियो। स्कुलबाट भागेर सुटिङ हेर्न जान्थे, यस्तो काम गरेर यहाँसम्म आएका रहेछन् (भिडियो हेर्नुस)
९४ वर्षकि यी बुढी आम जो भुत घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ, रातभरि भुतले तर्सार खपिसक्नु पार्दैन (भिडियो हेर्नुस्)-